Yintoni amandla elanga: iimpawu, iintlobo, ukusetyenziswa kunye neenzuzo | Uhlaziyo oluhlaziyiweyo
Yintoni amandla elanga
Ngaphakathi kwamandla ahlaziyekayo, amandla elanga yenye yezona zinto zibalulekileyo kuba ephuhliswe kakhulu kwaye anokusetyenziswa kwiindawo ezininzi zehlabathi. Noko ke, abantu abaninzi abazi kakuhle Yintoni amandla elanga nokuba isebenza njani ngokufanelekileyo.
Ngenxa yesi sizathu, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela ukuba yintoni amandla elanga, ziphi iimpawu zayo, iintlobo kunye neenzuzo ekusebenziseni kwayo.
1 Yintoni amandla elanga
2 Yintoni amandla e-photovoltaic
3 Yintoni amandla eshushu elanga
4 Ukusetyenziswa okuphambili
Amandla elanga yenye ekwaziyo ukusebenzisa ithuba amandla elanga ukusuka kumasuntswana okukhanya ukuvelisa amandla athi kamva aguqulwe abe ngumbane. Lo mthombo wamandla ucoceke ngokupheleleyo, ngoko awungcolisi imekobume okanye ukhuphe iigesi eziyingozi emoyeni. Ukongezelela, inenzuzo enkulu yokuhlaziywa, oko kukuthi, ilanga aliyi kuphelelwa amandla (okanye ubuncinane iminyaka eyibhiliyoni embalwa).
Emva kokuba siyazi ukuba yintoni amandla elanga, siza kubona ukuba zeziphi iindidi eziphambili ezikhoyo: i-photovoltaic kunye ne-thermal.
Yintoni amandla e-photovoltaic
Iipaneli zelanga zisetyenziselwa ukuqokelela amandla elangeni ezikwaziyo ukuthabatha iifotoni zokukhanya kwimitha yelanga kwaye ziguqule zibe ngamandla. Ukuvelisa amandla e-photovoltaic, kuyimfuneko ukubamba iifotoni zokukhanya ezinemitha yelanga kwaye ziguqule zibe ngumbane ukuze zisetyenziswe. Oku kunokufezekiswa ngenkqubo yokuguqulwa kwe-photovoltaic ngokusetyenziswa kwepaneli yelanga.
Iphaneli yelanga ineseli ye-photovoltaic njengento ebalulekileyo. Le yimpahla ye-semiconductor (eyenziwe nge-silicon, umzekelo) ukuba Ayifuni iindawo ezihambayo, akukho mafutha, kwaye ayivezi ngxolo. Xa le seli ye-photovoltaic iboniswa ngokuqhubekayo ekukhanyeni, ithatha amandla aqulethwe kwiifotoni ezikhanyayo kwaye inceda ukuvelisa amandla, ukubeka intshukumo yee-electron ezibanjwe yintsimi yombane yangaphakathi.
Xa oku kusenzeka, ii-electron eziqokelelwe kumphezulu we-photovoltaic cell ziza kuvelisa i-current ngqo. Ekubeni i-voltage yemveliso yeeseli ze-photovoltaic iphantsi kakhulu (i-0,6V kuphela), idityaniswe ngokulandelelana, kwaye icala langaphambili lifakwe kwipleyiti yeglasi, kwaye icala langaphambili lifakwe kunye nezinye izinto ezichasene ne-corrosion. Umqolo wakho (kuba uya kuba semthunzini ixesha elininzi).
Uluhlu lweeseli ze-photovoltaic zidibaniswe kwaye zifakwe kwizinto ezingentla zokwenza imodyuli ye-photovoltaic. Kule nqanaba, unokukwazi ukuthenga iimveliso ukutshintshela kwiipaneli zelanga. Ngokuxhomekeke kwitekhnoloji kunye nohlobo losetyenziso, imodyuli inomhlaba ongaphezulu we-0,1 square meter (10 watts) ukuya kwi-square meter (1 watts), ixabiso eliphakathi elibonisiweyo, kunye ne-12 V, 24 V okanye 48 V ngokuxhomekeke kwisicelo.
Njengoko kukhankanyiwe ngasentla, ngenkqubo yokuguqulwa kwe-photovoltaic, amandla afumaneka kwi-voltages ephantsi kakhulu kunye nokuhamba ngokuthe ngqo. La mandla akakwazi ukusetyenziswa kwikhaya, ngoko ke kuyimfuneko ukuba, kamva, i-inverter yangoku isetyenziselwa ukuyiguqula ibe yi-alternating current.
Yintoni amandla eshushu elanga
Njengoko igama layo libonisa, luhlobo lwamandla ahlaziyekayo nacocekileyo aquka ukusebenzisa amandla elanga ukuvelisa umbane. Ngokungafaniyo neepaneli zelanga ezisetyenziselwa amandla e-photovoltaic ukuvelisa umbane kwiifotoni zokukhanya ezifumaneka kwimitha yelanga, la mandla athatha ithuba lemitha yokutshisa ulwelo.
Xa imitha yelanga ibetha ulwelo, iyalufudumeza yaye olu lwelo lushushu lunokusetyenziswa kwizinto ezahlukahlukeneyo. Ukufumana umbono ongcono, i I-20% yokusetyenziswa kwamandla esibhedlele, ihotele okanye ikhaya lihambelana nokusetyenziswa kwamanzi ashushu. Ngamandla obushushu elanga sinokuwafudumeza amanzi ngamandla elanga kwaye siwasebenzise ukuze, kweli candelo lamandla, akufuneki sisebenzise i-fossil okanye amanye amandla.
Amandla obushushu belanga anceda kakhulu ekunciphiseni iindleko, ukonga amandla kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwekharbon diokside ebangela ukufudumala kwehlabathi kunye nokutshintsha kwemozulu.
Enye yezona zinto zisetyenziswayo ze-photovoltaic zamandla elanga kukufakwa kwe-photovoltaic sensors kunye ne-inverters yangoku, enokuthi iguqule amandla aqhubekayo awenziwe kwiipaneli zelanga kwi-alternating current kwaye angenise kwigridi.
Iindleko zamandla elanga nge-kilowatt ngeyure zixabisa kakhulu kunezinye iinkqubo zokuvelisa amandla. Nangona oku kuye kwatshintsha kakhulu ekuhambeni kwexesha. Kwezinye iindawo apho inani leeyure zokukhanya kwelanga liphezulu, ixabiso le-solar photovoltaic liphantsi kakhulu. Kufuneka ube nomgca ozinikeleyo woncedo lwemali kunye nomthetho ukukhawulelana neendleko zemveliso. Ekugqibeleni, sinceda iplanethi yethu ukuba ingangcoliswa, ukutshintsha kwemozulu kunye nongcoliseko.
Ikwasetyenziswa rhoqo kula macandelo alandelayo:
Ukhanyiso. Olunye ukusetyenziswa kwamandla elanga e-photovoltaic kukukhanyisa iingcango zokungena, iindawo zokuphumla kunye nokudibanisa kweedolophu ezininzi. Oku kunciphisa iindleko zokukhanyisa.
Ukutyikitya. Olu hlobo lwamandla lusetyenziswa rhoqo nangakumbi ukubonisa umqondiso endleleni.
Olu hlobo lwamandla lusetyenziswa ngamaxesha amaninzi kwimimandla yamandla aphindaphindayo, unomathotholo kunye nomabonwakude.
Ukufakwa kombane emaphandleni. Ngoncedo lwenkqubo esembindini, izixeko ezisasazeke ngakumbi kunye needolophu ezincinci zinokukonwabela umbane ohlaziyekayo.
Iifama kunye nemfuyo. Ukusetyenziswa kwamandla kule ndawo, amandla elanga e-photovoltaic asetyenziswa. Ukukhanyisa, sebenzisa iimpompo zamanzi kunye neepompo zokunkcenkceshela zokusenga, njl.
Ngamandla acocekileyo ngokupheleleyo enceda ukunciphisa i-carbon footprint kakhulu. Siyabulela ekusebenziseni kwayo siyakuphepha ukuveliswa kweegesi zegreenhouse kwaye asingcolisi ngexesha lesizukulwana sayo okanye ngexesha lokusetyenziswa kwayo.
Ngumthombo wamandla ahlaziyekayo kunye nozinzo ngokuhamba kwexesha.
Ngokungafaniyo namanye amandla ahlaziyekayo, La mandla anokufudumeza izinto.
Ayifuni naluphi na uhlobo lokutsalwa rhoqo zemathiriyeli ukuze isebenze. Oku kwenza amandla angabizi kakhulu. Iphaneli yelanga inokuba luncedo ngokugqibeleleyo iminyaka engama-40.
Ukukhanya kwelanga kuninzi kwaye kuyafumaneka ngoko ukusetyenziswa kweepaneli zelanga kuyindlela esebenzayo.
Yehlisa isidingo sokusebenzisa amafutha efosili ke iyanceda ukugcina izixhobo zendalo kunye nokunciphisa ungcoliseko lokusingqongileyo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokwazi ukuba yintoni amandla elanga, iintlobo zayo kunye neempawu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Yintoni amandla elanga
Okokuqala, ndikunqwenelela umsebenzi olungileyo kunye nempumelelo engaphezulu.
Itekhnoloji ecocekileyo yobuntu.
Bendifuna ukwazi ngakumbi malunga noku kungasentla ngokufumana ulwazi oluninzi kuwe.
Yintoni uqoqosho lwesetyhula
Herbicide eyenziwe ngumntu